विवाह पछि स्त्रीलाई हुन्छ यी पाँच कुराको पछुतो ! – Online Khabar 24
विवाह पछि स्त्रीलाई हुन्छ यी पाँच कुराको पछुतो !
धेरै जसो महिला विवाहपछि नयाँ परिवेशमा आफूलाई लैजाने गर्दछन्।यसमा धेरै जसो महिला यस्ता हुन्छन्, जसले पछि गएर आफूले गरेको फैसलामा पछुतो मान्ने गर्दछन्।
कुनै समय त उनीहरुलाई विवाह गरेमै पछुतो हुने गर्दछ। आउनुहोस् जानौँ विवाहपछि प्राय महिलालाई कुरा कुरामा पछुतो हुने गर्दछ।
सेल्फ टाइम:विवाहपछि महिलाले पतिसँग सँगै परिवारलाई पनि समय दिनु पर्ने हुन्छ। उनीहरुमाथि यति धेरै जिम्मेवारी आउने गर्दछ की उनीहरु आफूलाई समय दिन पाउँदैनन्। जसबाट दिक्क भएर उनीहरुमा विवाह गरेकोमा कहिलेकाही पछुतो मान्ने गर्दछन्।
पर्सनल स्पेन:हर कोहीको जीवनमा पर्सनल स्पेन आवश्यक हुने गर्दछ। यदी हामीले विवाहको कुरा गरौँ भने उनीहरुलाई यस्तो जीवनका लागि समयनै मिल्दैन्। जब उनीहरुलाई आफ्नो चीज गर्ने मौका नै मिल्दैन् तब उनीहरुलाई विवाह गरेमा पछुतो हुने गर्दछ।
आफैलाई परिवर्तन गर्नु:विवाहपछि महिलालाई धेरै सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरुले हरेक स्थितीमा आफूलाई फिट राख्ने प्रयास गर्नु पर्ने हुन्छ। यी सबै कुरालाई लिएर कहिलेकाही दिक्क हुने हुँदा उनीहरु विवाह गरेकोमा पछुतो मान्ने गर्दछन्।
पूर्व पति वा प्रेमसँग तुलना:हुनत कहिले पनि पूर्व प्रेम वा पतिसँग तुलना गर्नु हुँदैन्। कहिलेकाही विवाहपछि महिलाका अघि विभिन्न समस्या आउने गर्दछन्, तब उनीहरुलाई महशुस हुने गर्दछन् की यो भन्दा बरु पूर्व प्रेम वा पति भएको भए राम्रो हुने थियो होला । यस्तो अवस्थामा महिला आफ्नो विवाहको फैसलामा पछुतो मान्ने गर्दछन्।
बच्चा बनाउन हतार:विवाह गर्ने वित्तिकै युवतीमा बच्चा जन्माउने दवाब आउन सुरु हुन्छ। अरु यसका लागि युवती तयार नहोस्, तर कुनै न कुनै बहानामा उसले यो कुरा सुन्नु पर्दछ। हरेक दिन बच्चाको कुरा सुन्दा उनीहरुलाई विवाह गरेकोमा पछुतो हुने गर्दछ। बुटवल खबर बाट साभार गरियको खबर ।
Prevऋषि धमलालाई सम्झिदै एलिजा गौतमले क्यानाडाबाटै राखिन यस्तो पोष्ट !
nextपति पत्नी बीच मिल्दैन तालमेल ? यसो गर्नुहोस्